Iminikelo kuphrojekthi yeXfce | Kusuka kuLinux
Iminikelo yephrojekthi yeXfce
Akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi iphrojekthi Xfce Ihlale ihlupheka ngokushoda ngokwabathuthukisi nezinsizakusebenza ngokujwayelekile, kungalesi sizathu umjikelezo wayo wokuthuthuka uhamba kancane uma uqhathaniswa nowamanye ama-DE. Ngenxa yalezi zizathu sekuyisikhathi eside izinkundla Xfce bacele indlela yokuthumela iminikelo kuphrojekthi; komunye wemiyalezo, Nick schermer (inhloko yephrojekthi) ubalule iqiniso lokuthi bebesebenza ekwakheni isisekelo ukuze bakwazi ukuthola nokusabalalisa izimali, kepha, yize ikhasi nabanye, lokhu akuzange kuqede ukwenzeka (kusukela kulokho esikwaziyo kuze kube manje bekunezithiyo eziningi zokuphatha ezenzekile).
Yebo, ngemuva kwesikhathi eside manje kunqunywe ukuthi kukhethwe enye inketho, unjiniyela osebenzayo wabo bobabili Xfce (njengamanje uphethe ushintsho kungxoxo yokubonisa) njengelungu le- Xubuntu nomhleli we Iphrojekthi ye-Shimmer, USimon Steinbeiss, Nge U-Eric Koegel, Futhi umqambi futhi zombili izinhloko zamanje ze-xfce-power-manager, bamemezele ku- uhlu lwamakheli de Xfce wakhe i-akhawunti ku- I-Bountysource yeXfce.
Manje yini I-Bountysource?
Umlingani wethu lolbimbo wasitshela ngakho ngesonto eledlule, kepha ngokuyisisekelo, njengale nguqulo yamahhala ye Imibuzo evame ukubuzwa ye- I-Bountysource:
I-Bountysource iyinkundla yezimali yesoftware yomthombo ovulekile. Abasebenzisi bangathuthukisa amaphrojekthi womthombo ovulekile abawathandayo ngokwakha / ukuqoqa imivuzo nangokuzibophezela ekuqoqeni imali.
Ngeminye imibuzo ehlobene nokuthi ngubani ongabeka imivuzo, angamakwa nini ukuthi axazululiwe, njalonjalo, ngiphakamisa ukuthi kufundwe i-FAQ eshiwo ngenhla.
Manje, njengoba uSimon echaza emlayezweni wakhe, kunezindlela ezimbili zokunikela:
Nikeza umvuzo kusiphazamisi esithile. Iningi lezinto ezinemibiko yazo yamaphutha sezivele zifakiwe endaweni yesikhulumi, futhi zingaseshwa lapha.
Sekela ithimba le Xfce bebonke
Isiteji isivele iyasebenza futhi inezici ezithakazelisa kakhulu, njengokuthi abantu abaningana bangabela imiklomelo kusiphazamisi esifanayo ngokwesibonelo, noma ukuthi abayithathi ingxenye yemali ngokubabela; kepha kunjalo kakhulu (ngomqondo wami okungenani), lowo noma ngubani anganikela ngomvuzo ngaphandle kokuthi abe yingxenye noma abe nobudlelwano nephrojekthi. Njengoba sengishilo, konke lokhu kungabhekwa ekhasini.
Inhloso yakho konke lokhu akukhona ukuzuza ngakho Xfce kepha kusheshise ukuthuthuka kwabo, ikakhulu uma usohlwini lwamakheli we I-Xfce-dev kudaliwe uhlu lwezimbungulu ezibucayi ukukhulula I-Xfce 4.12.
Ngakho-ke ngubani onganikela ukwenza lokho, uma kungenayo inhloso ethile, eqenjini lonke; Kepha-ke, ungahle ube nentshisekelo nge-bug ethile, ngalesi sikhathi ngokwesibonelo kuneminikelo yokwengeza isici veza njengalezo ezinye izindawo, noma lokho okunikezayo weqa-xd. Ukusatshalaliswa kwezindaba nakho kubalulekile ukusiza, nginethemba lokuthi ekugcineni lokhu kuzokunika umfutho wokuthi Xfce isidingo isikhathi eside.
Okokugcina, ngithanda ukusho ukuthi noma iminikelo ingenziwa ngesici esithile, lokhu akuqinisekisi ukuthi abathuthukisi bazonquma ukusebenzela kukho. Ngokwemithetho ye- I-Bountysource, umvuzo ungafunwa kuphela ngenqubo lapho unjiniyela anikezela ngayo ikhodi futhi ifakwe kuphrojekthi futhi bonke abanikeli bavota ukuyamukela. Kodwa-ke, kungahle kwenzeke ukuthi umvuzo kusiphazamiso noma isici esingeziwe sikhona kepha akekho umuntu onentshisekelo yokusebenza kuso, yize kungenakwenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Iminikelo yephrojekthi yeXfce
Kuhle lokho. Bengiyithanda kakhulu iXfce phambilini, kepha iqiniso ukuthi inezimbungulu eziningana futhi ayinazo ezinye izici, okungenza ngikwazi ukukhetha i-KDE noma iCinnamon ngisho naku-netbook.
Impilo ye-XBD ngesitayela kusho
Yebo, kuzwakala kuyinkimbinkimbi kakhulu kimi, ngoba abayibeki nje kuphela inkinobho ye-paypal futhi bathole iminikelo, bengingayinika futhi ngijabule kakhulu. e wanikela ngesoftware ethile yamahhala kumaphrojekthi akhe. Lo mbono ubonakala muhle kimi, kepha ngiwubona uyinkimbinkimbi. ngokubona kwami ​​njengomnikeli. Jabulela
Phendula empilweni ye-XBD ngesitayela
Angiboni ukuthi kunzima kanjani, iminikelo ingenziwa ngeGoogle Walet, iBitCoin nePaypal kufakwe nje ngokufinyelela ekhasini lephrojekthi lapha https://www.bountysource.com/teams/xfce bese ukhetha inani ozonikela ngalo ngakwesobunxele.
Ngisebenzise i-XFCE kuze kube yinguqulo yokugcina lapho bebeka khona i-Whisker futhi bakhulisa ukusetshenziswa kokuqala nge-50MB. Ngalokho, ngabuyela ku-LXDE (ekugcineni ezothunyelwa ku-QT) futhi ngisebenzisa kabi lapho ngiqala futhi nge-OpenBox endiza emshinini wami omdala.
Ihlazo ngoba ngiyithande kakhulu i-XFCE. Sethemba ukuthi bathola imali futhi bayayithuthukisa; ngenkathi ngivele ngibona kunzima kimi ukuphuma kule ndiza ebizwa nge-LXDE.
Imenyu ye-whisker ingasuswa kalula bese ifaka imenyu yangempela ye-Xfce. Angicabangi ukuthi nabathuthukisi be-Xfce bakwenzile, othile wakwenza futhi amanye ama-distros ahluleka ukwenza izinhlobo zawo nge-Xfce. Kufanele ufunde kabanzi.
Njengoba bekukhuluma, iWhisker Menu akuyona ingxenye esemthethweni yeXfce, yiphrojekthi ezimele nokuthi uXubuntu uyingezile (kanye nokunye ukwabiwa), ngiyazisola ngezwi elisika kancane kepha angiyididanisi iXfce neXubuntu. Futhi kulula njengokuyisusa nomphathi wephakheji wokusabalalisa kwakho; thola uma kuyi-Debian / Ubuntu, pacman uma kuyi-Arch / Manjaro, Urpm uma kunguMageia, noma yum uma kunguFedora.
Hhayi-ke, ake sibone. Iphutha lami. Hhayi ukuthi isebenzise iXFCE ngqo kepha iXubuntu. Futhi uXubuntu wafaka iWhisker kuyo. Futhi ngubani owaziyo ukuthi yini enye ngaphandle kokusetshenziswa enyukele ngaphezulu kwe-50MB. Njengoba umshini wami mdala kakhulu nginqume ukubuyela emuva futhi ngamisa uLubuntu. Ekugcineni bekuyisinyathelo esithuthukela phambili ngoba i-OpenBox iyisimangaliso ngempela.
Ngiyethemba sengizichaze kangcono manje 🙂
Angikaze ngiqonde ngempela ukuthi kungani kufanele ngibeke i-Whisker uma i-XFCE (futhi kulokhu ngiqonde ukuthi i-XFCE) isivele inokuthile okufanayo ebhokisini. Ngicabanga ukuthi nge-Alt + F3 yenziwe yasebenza.
I-PS: Yebo, bengingayisusa i-Whisker nakho konke lokho, kepha bekungeke kuze kutholakale ukusetshenziswa okuphansi kwe-RAM kaLubuntu.
I-Whisker ku-Debian Jessie ayinyusi ukusetshenziswa ngo-50 MB (noma ngesigamu), kufanele kube enye i-Xubuntu add-on eyenza ...
Yilokho nje engikushilo
Kungani umuntu angaya ku-alt + f3 ayofuna okuthile, uma engamane abeke imenyu yabo yohlelo lokusebenza futhi afune noma yini abayifunayo, kanye nokuba nezintandokazi zabo endaweni eyodwa nezinye izinqamuleli eziningana?
Cindezela ku-Alt + F3 uzobona ukuthi uthola ini. Kukhona labo abasebenza nge-PC ngokushesha ngekhibhodi kunegundane. Ziyizindlela ezilula zokwenza izinto. Mhlawumbe iWhisker inesinqamuleli, akunjalo? Yebo, imenyu ezenzakalelayo ye-XFCE (okungeyona leyo Whisker) iphuma ngokwayo ngokucindezela leyo nhlanganisela. Ngikumema ukuthi uzame futhi uzobona ukuthi ngiqonde ukuthini. Iyafana ne-Whisker. Ngaphezu kwalokho, ngeke ngimangale uma unjiniyela ephefumulelwe yiyo ukukhiqiza iWhisker.
Angisenale ntambo. Ngokusobala, noma ngabe ngibhala kanjani, angikwazi ukuzenza ngiqondwe. Sanibonani zihlobo 🙂
Angicabangi ukuthi kunentuthuko enkulu esele ye-gtk2, ayilimazi. Ngicabanga ukuthi kungekudala bazothuthela ku-gtk3 noma nina enazi i-qt.
Ngenguqulo 4.10 kwakukhona abagxeki ayengavumelani nabo ngokuhlala ku-GTK 2. Kepha ngenguqulo 4.12, cishe unyaka nohhafu ngemuva kwesheduli yayo yokukhishwa nokugcina i-GTK 2… Akubukeki kahle kuXfce. Kepha, uma uDebian ekubeka njengedeskithophu ezenzakalelayo, bayabethemba, futhi yimina engimsebenzisayo.
Futhi uhlela nini ukushiya i-gtk2?
Phila isikhathi eside XFCE !!!!!!!
ISUSE Studio (Ingxenye II): Ungayikhetha kanjani iSoftware yethu